भारतमा पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि सवाल उठाइयो
२o७५ जेठ ९ बुधबार / Wednesday, May 23, 2018
२o७४ पौष २८ शुक्रबार
तस्बिर : बीबीसी हिन्दी
दक्षिण एसिया । भारतको सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले इतिहासमै पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको अनियमिततालाई लिएर सार्वजनिक रुपमै गुनासो गरेका छन् । न्यायाधीशहरु जे चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले गुनासो गरेका हुन् ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेपछि भारतमा यसले हलचल मच्चाएको छ । विशेषगरी चार जना न्यायाधीशले अदालतभित्र प्रशासनिक अनियमितता भएको आरोप लगाएका हुन् ।
सर्वोच्चका दुई नम्बर न्यायाधीश मानिने चेलामेश्वरले भनेका छन्, ‘करिब दुई महिनापहिले हामी चार न्यायाधीश मिलेर प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र लेखेका थियौँ र भेटेका थियौँ । हामीले उहाँसँग अदालतमा जे भइरहेको छ, त्यो सही नभएको पनि बतायौँ । प्रशासन ठीकसँग नचलेको बतायौँ । यो मामिला एउटा मुद्दालाई लिएर थियो ।'
उनले आफूहरुले यो कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई सम्झाउन असफल रहेको समेत बताएका छन् । त्यसपछि आफूहरुले राष्ट्रकै अगाडि यो कुरा राख्नुपरेको दाबी गरेका छन् । यो मुद्दा सीबीआई जज लोयाको शंकास्पद मृत्युलाई लिएर भएको न्यायाधीशहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको पत्र पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । २० वर्षपछि आफूहरुमाथि आत्मा बेचेको आरोप नलागोस् भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेको उनीहरुको भनाइ छ । लोकतन्त्रलाई कायम राख्न पनि सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्था सही ढंगले चल्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुले सीजेआईमाथि महाभियोग चल्ने र नचल्ने भन्नेबारे भने राष्ट्रले नै विचार गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । बितेका केही महिना जे नहुनुपर्ने त्यही भइरहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको उनीहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
भारतमा न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरेको यो नै पहिलोपटक रहेको बताइएको छ । भारतमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रसँग दुई नम्बर वरीयताका वरिष्ठ न्यायाधीश चेलामेश्वरको धेरै मुद्दालाई लिएर विवाद रहेको भारतीय मिडियाहरुले बताएका छन् ।
नक्कली नागरिकता लिने भारतीय पक्राउ
विराटनगर / किर्ते कागजका आधारमा एक जना भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोमा त्यसको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ । भारत बिहार अररिया जिल्लाका ३५ वर्षीय मुजफ्फर हुसैनले किर्ते
भारतको तामिल नाडुमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि नौ जनाको मृत्यु
नयाँ दिल्ली । भारतको दक्षिणी राज्य तामिल नाडुमा तामा खानी बन्द गर्न भन्दै विगत तीन महिनादेखि जारी आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागि कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएका र अन्य २० जना घाइते
राष्ट्रकवि घिमिरेलाई थप उपचारका लागि भोलि भारत लैजाने
काठमाडौँ । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई थप उपचारको लागि भोलि भारत लैजाने तयारी गरिएको छ । धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचार गराइरहेका घिमिरेलाई थप उपचारका लागि भारतको नयाँदिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा लैजाने तयारी
काठमाडौँ / भारत सरकारले विराटनगरस्थित आफ्नो स्थल कार्यालय (क्याम्प अफिस) बन्द गरेको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २०६५ साउनमा कोशी नदीमा भीषण बाढी आएकोे अवस्थामा खोलेको ‘फिल्ड अफिस’को उद्देश्य पूरा भएकाले
ठेक्का लागेको वर्ष दिनपछि सम्झौता
क्षयरोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्दै विद्यालयमा क्षयरोगीको खोजी
एक अर्ब ४० करोड लगानीमा जलविद्युत् केन्द्र निर्माण हुने
इटहरीमा बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु
दक्षिण अफ्रिकाका एबी डिविलीयर्सद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास
सन्दीप बने टाटाको ब्राण्ड एम्बेसडर
अप्रेसन गराएर आँखाको सेतो भागमा प्लाटिनम राखियो !
जनता बैंकका पाँच शाखा विस्तार
महालक्ष्मी विकास बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
आगामी १७ गतेदेखि जीतपुरसिमरामा मेयर कप फुटबल हुने
खेलपछि सन्दीपले अमित मिश्रालाई के भने ? (भिडियो सहित)
रियलविरुद्ध भिल्लारियलको उत्कृष्ट कमब्याक, तेस्रो स्थानमा मै रोकियो रियल म्याड्रिड
यी ५ खेलाडी 'रिटेन' नगरेकोमा पछुताउदै आइपिएल फ़्रेन्चाइजी
अष्ट्रेलियाको ला ट्रोब बिजनेस स्कुलले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई भर्ना खोल्यो, नयाँ छात्रवृत्तिहरूको घोषणा
मुम्बईको इण्डियन्सको यस आइपिएलमा 'शुन्य रन' को लाजमर्दो रेकर्ड
दुई खेल खेलेका सन्दीप आइपिएलमा यस्तो रेकर्ड राख्दै छन् शिर्ष स्थानमा
आइपिएलको डेभ्यु सिजनमा आर्चरले बनाए ‘लाजमर्दो’ रेकर्ड
३८ क्विन्टल सुन तस्करीका नाइके 'गोरे' पक्राउपछि सार्वजनिक (भिडियोसहित)
सन्दीप लामिछानेले नेपाल फर्किएपछि भने, ‘आइपिएलको अनुभव राष्ट्रिय टिममा लगाउँछु’
अर्जेन्टिनाले छान्यो विश्वकपका २३ खेलाडी, को को परे ?
सन्तोष राज पाण्डे